Yangon Trend 200
တစ်ရက်အတွင်း သိန်း (၅၀) အထိ ငွေလွှဲနိုင်မည့် Citizens Application
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ငွေပို့ငွေလွှဲခြင်းနှင့် ငွေပေးချေခြင်းစသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် ဒီဂျစ်တယ် မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ် အပလီကေးရှင်း (Citizens Application) ကို Read full article
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ လက်ရှိခေါ်ယူနေသော Graphic Designers အလုပ်များ
Graphic Designer နဲ့ပတ်သတ်သော အလုပ်များကို ရှာဖွေနေသူများ လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန် ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ အလုပ်ခေါ်စာ (၁၂) ခုကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ Read full article
ဩဂုတ် (၁၂) ရက်နေ့ ရန်ကုန် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း၊ စက်သုံးဆီဈေးနှင့် ရွှေဈေးများ
ဩဂုတ် (၁၂) ရက်နေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကို Central Bank Myanmar / စက်သုံးဆီဈေးများကို Denko ဆီဆိုင်/ ရွှေဈေးများကို အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်တို့မှ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ Read full article
လစဉ်ထည့်ဝင်နေရတဲ့ လူမှုဖူလုံရေးကြေးက ဘယ်လို ခံစားခွင့်တွေရှိတာလဲ?
လူမှုဖူလုံရေး အာမခံစနစ်ဆိုတာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားနဲ့ အစိုးရတို့က ရန်ပုံငွေတွေ စုပေါင်းထည့်ဝင်ပေးသွင်းရတဲ့ အာမခံကြေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ... Read full article
ဩဂုတ် (၁၁) ရက်နေ့ ရန်ကုန် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း၊ စက်သုံးဆီဈေးနှင့် ရွှေဈေးများ
ဩဂုတ် (၁၁) ရက်နေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကို Central Bank Myanmar / စက်သုံးဆီဈေးများကို Denko ဆီဆိုင်/ ရွှေဈေးများကို Read full article
အာရှတစ်ဝန်း အကောင်းဆုံးအထွေထွေအာမခံဆုကို (၄) ကြိမ်မြောက် ရရှိခဲ့သည့် KBZ MS
စင်ကာပူအခြေစိုက် Insurance Asia မှ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့က ဦးဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Insurance Asia Award 2020 ဆုချီးမြှင့်ပွဲတွင် ​မြန်မာနိုင်ငံမှ KBZ MS အာမခံကုမ္ပဏီက Domestic General Insurer of the Year - Myanmar နှင့် Digital Insurance Initiative of Read full article
Huawei မှ Flagship chipset ဖြစ်သော Kirin 9000 series ကိုထုတ်လုပ်မှုရပ်နားမည်
တရုတ်နိုင်ငံမှ အင်အားကြီး Smartphone ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သည့် Huawai သည် လာမည့် စက်တင်ဘာလမှစတင်၍ 5G စနစ်ပါဝင်သော Kirin 9000 Chipset များကို ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဩဂုတ်လ ပထမပတ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Read full article
ဩဂုတ် (၁၀) ရက်နေ့ ရန်ကုန် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း၊ စက်သုံးဆီဈေးနှင့် ရွှေဈေးများ
ဩဂုတ် (၁၀) ရက်နေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကို Central Bank Myanmar / စက်သုံးဆီဈေးများကို Denko ဆီဆိုင်/ ရွှေဈေးများကို Read full article
COVID-19 ချေးငွေလျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ
COVID-19 ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပက်သက်၍ မည့်သည့်အချက်အလက်များ လိုအပ်သည်ကို လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ Read full article
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအချက်တွေကို စဉ်းစားသင့်လဲ...?
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေဟာ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာရေစီးကြောင်းနဲ့အညီ အများအပြား ... Read full article
ဩဂုတ် (၇) ရက်နေ့ ရန်ကုန် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း၊ စက်သုံးဆီဈေးနှင့် ရွှေဈေးများ
ဩဂုတ် (၇) ရက်နေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကို Central Bank Myanmar / စက်သုံးဆီဈေးများကို Denko ဆီဆိုင်/ ရွှေဈေးများကို အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်တို့မှ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ Read full article
၂၀၂၀ ပထမနှစ်မနှစ်ဝက်အတွင်း အမြတ်ငွေ ၇၃၅ ဘီလီယံရရှိခဲ့သော SCG
SCG ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးခုမှာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး အမြတ်မှာ မြန်မာကျပ်ငွေ ၄၁၂ ဘီလီယံကျပ် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉၄ သန်း) သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်ကထက် ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း Siam Cement Group (SCG) မှ သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ Read full article